Saabuuntii Ugu Horaysay Ee Caano Geel Laga Sameeyo Oo Suuqyada Dunida Gashay | Hawraar
September 28, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Saabuuntii Ugu Horaysay Ee Caano Geel Laga Sameeyo Oo Suuqyada Dunida Gashay
Wax tarka Caanaha Geelu waa kuwo dunidu isla wada qirsan tahay, waxaana baadhitaano cilmi iyo kuwo kuwo diimeedba ay inoo xaqiijeen isku dheeli tirnaanta dhinac kasta ay uga leeyihiin nolosha iyo caafimaadka aadamiga.
Haddaba tan iyo intii saynis yahanada dunidu ku qanceen wax tarka caanaha geela, waxa soo kordhayay, waxyaabaha laga farsameeyo, sida dawooyinka iyo qaar ka mid ah cuntooyinka la quuto oo ay reer galbeedku si rasmi ah ugu darsadeen.
Laakiin sheekada ugu danbaysay uguna cusub ayaa ah, saabuun laga farsameeyay caano geel, oo waliba si dabiiciya loo sameeyay oo suuqyada caalamka markii ugu horeeyay soo gashay, taas oo lagu sameeyay warshad maal gashadayaal tiro badani wada leeyihiin oo laga dhisay dalka Isu taga Imaaratka carabta ee midoobay.
Sida madaxa farsamada ee warshadani warbaahinta u sheegtay, saabuuntan ayaa boqolkiiba todobaatan ka mid ah, laga farsameeyay caano geel saafi ah, halka boqolkiiba sodonka kale ka yahay, malab iyo saliid saytuun, taas oo marka la isku daro ka dhigaysa saabuunta ugu wanaagsan dunida uguna tayada saraysa caafimaad ahaan.
Inta badan waxa saabuuntan farsamaynteeda loo adeegsaday qaab dabiici ah oo gacanta lagu sameeyay, waxaanay noqonaysaa, sida la sheegay tii ugu horaysay nooceeda ee abid caanaha geelaha laga farsameeyo.
Sida mulkiilayaasha warshadan laftoodu ku doodeen, farsamo ahaan in caanaha geela gala sameeyo saabuun ma jirto cid uga horaysay dunida, waxaanay rejaynayaan in magaca iyo sumadoodu u gasho liiska ganacsiga aduunka, sidaana ay ku yeeshaan loogana danbeeyo.
Dhinaca caafimaadka waxa haddii ay sidan loo sameeyay ku sii wado warshadu noqon doonta mid dalab badan hesha aadna dunidu ugu xidhnaan doonto, sababtoo ah? Caanaha Geela, Saliida Saytuunka iyo Malabka ayaa marka la isku daro dhamaantood dawo iyo wax tar u wada leh aadamiga.